RIST ဖိုရမ် IBC2019 မှာအခမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် NAB ပြရန်သတင်း - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » RIST ဖိုရမ် IBC2019 မှာအခမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ
RIST ဖိုရမ် IBC2019 မှာအခမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။4စက်တင်ဘာလ, 2019 - အ RIST ဖိုရမ်အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC16 မှာတနင်္လာနေ့, 2019 စက်တင်ဘာလပေါ်တင်ပြချက်များနှင့် panel ကဆွေးနွေးမှုများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ", နေ့လည်စာနှင့်လေ့လာပါ" အခမဲ့အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ RIST ဖိုရမ်စီမံခြင်းမပြုရသေးသောကွန်ရက်များကျော်နိမ့်အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများ၏ပို့ဆောင်မှုများအတွက်ပွင့်လင်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့်နည်းပညာပိုင်းအားကောင်းတဲ့ RIST protocol ကိုမြှင့်တင်ရန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားတဲ့လွတ်လပ်သောအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ session တက်ရောက် RIST နှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဘို့က၎င်း၏အလားအလာအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်။ RIST ကျွမ်းကျင်သူတွေကဖိုရမ်နှင့် protocol ကိုဆွေးနွေးရန်လက်ပေါ်ပါလိမ့်မည်ရှိရာ "နေ့လည်စာနှင့်သင်ယူမှု," နှင့်အတူစတင်ခြင်း, ထိုနေ့ရက်သည်ကိုလည်းတင်ပြချက်များနှင့် Amazon Web Services (AWS) ဒြပ်စင်မှတစ်ဦး panel ကဆွေးနွေးမှုမည်ဖြစ်သည် ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်, DVEO, Net ကဝိပဿနာ, ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များ, VideoFlow နှင့် Zixi ။
ခေါင်းစဉ်ဟာ RIST အဓိကပရိုဖိုင်, encryption ကို, High-end တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမီဒီယာ Workflows, RIST သုံးပြီးလူသန်းပေါင်းများစွာ၏သောင်းချီမှအကြောင်းအရာပေးပို့အဖြစ် RIST နှင့်မိုဃ်းတိမ်အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပုံစံများ၏အနာဂတ်ပြောင်းလဲနေကြသည်ကိုဘယ်လိုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။
"RIST ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကွဲပြားခြားနားသောစျေးသည်များအကြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အချက်ပြမှုများ interchanging များအတွက်ရိုးရှင်းသောသေးအလွန်အမင်းထိရောက်သောနည်းလမ်းပေးခြင်း, ရှိသမျှအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ပေါင်းစပ်အကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်" ဟုအလက်ဇန္ဒားSandström, အ RIST ဖိုရမ်ပူးတွဲကုလားထိုင်ကရှင်းပြသည်။ "RIST တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမီဒီယာ Workflows အတူရှုပ်ထွေးအများကြီးဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ "
"ဒီ session ကိုသူတို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Workflows ၌အကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနေ, RIST နှင့်၎င်း၏အလားအလာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်လာပညာပေးအကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်" ဟုယာကုပ်အမျိုးကို Kinsey က, RIST ဖိုရမ်ပူးတွဲကုလားထိုင်ကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ RIST သတ်မှတ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအခါနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကိုပြုတော်မူပြီအဖြစ် "ကျနော်တို့က IBC မှာ RIST နေ့ကအတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချဉ်းကပ်မှုယူပြီးနေကြသည်။ စပီကာများနှင့်ဟောပြောကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကနေဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အားလုံးအစည်းအဝေးများအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြပြီးလူတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် RIST နောက်ကွယ်မှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်အခွင့်အလမ်းပေးဖို့။ "
RIST လုပ်ကိုင်နိုင်သောသတ်မှတ်ချက်များ defining သို့အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတှေ့အကွုံပေါင်းစပ်ပြီး, ကျွမ်းကျင်သူများ၏အုပ်စုတစုတို့ကပူးတွဲတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများဖိုရမ် (VSF), ရောင်းချသူ end-သုံးစွဲသူများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးတစ်ခုလွတ်လပ်သောအုပ်စုတစ်စုကနေ posted နေကြသည်။ IBC မှာအဖြစ်အပျက်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရန်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.rist.tv/register-for-ibc-2019.
တစ်စံချိန်စံညွှန်းများ-based ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားဖြင့်ပူးတွဲတီထွင်, RIST စီမံခြင်းမပြုရသေးသောကွန်ရက်များကျော်နိမ့်အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုတစ်ခုပွင့်လင်းအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနှင့်နည်းပညာပိုင်းအားကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ရောင်းချသူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကလပ်စအတွင်းတီထွင်အခမဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်တွင် RIST နှင့်အတူအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတ်မှတ်ချက်များမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.rist.tv/.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC RIST စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-09-04
ယခင်: အဂ္ဂိရတ် Post ကိုအသံဆုကို-အနိုင်ရအင်ဒီ Dramedy "ဒီတောင်တက်" အတွက်လက်-Craft Foley ဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: IBC 2019 မှာ Matrox - ကုန်ပစ္စည်းကို Preview